आँचलको जन्मदिनमा उदिपको अमुल्य उपहार ! – Ramailo Sandesh
आँचलको जन्मदिनमा उदिपको अमुल्य उपहार !
आँचल शर्मा नेपालकी निकै चर्चित नायिका हुन् । उनले छोटो समयमा नै निकै लोभलाग्दो सफलता हासिल गरेकी छिन् । चलचित्र नाई नभन्नु ल ४ बाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा आएकी आँचलले छोटो समयमा नै धेरै चलचित्रमा काम गरिसकेकी छिन् ।
उनलाई पति उदिप श्रेष्ठले जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । भने मध्यरातमा केक पनि का टेका छन् । आफुले उपहार स्वरुप माया रहेको भन्दै उदिप श्रेष्ठ सामाजिक सञ्जाल इन्टाग्राममा लेख्छन्, ‘म तिम्रो आँखाको त्यो चमक विर्सने छैन, जस्ले मलाई तिम्रो प्रेममा डुबायो । जन्मदिनको शुभकामना मेरी प्यारी म तिम्रो चमक र मुस्कान कहिले निभ्न दिने छैन ।’
आज आँचलको जन्मदिन भएकाले उनलाई शुभकामना दिनेको ओइरो लागेको छ । सबैले उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन् । केहि दिन अघि अभिनेत्री आँचल शर्मा र उदिप श्रेष्ठको बिहे भएको वर्ष दिन पनि पुगेको छ । सो अवसरमा उनीहरू नवजिवन परोपकार समाज पुगेर सेवामा जुटेका थिए ।
मर्नुअघि आफ्नो ८ करोडको सम्पत्ति दिन ४० वर्षदेखि नभेटिएका साथीलाई खोज्दैछन् यी वृद्ध
आज विदेशी मुद्रा सटही गर्दै हुनुहुन्छ ? कुन देशको मुद्राको भाउ कति छ ? थाहा पाउनुहोस्